एमालेकै छ क्रेज ! उपमेयरमा हुँदै नभएको उम्मेदवारलाई ६ हजार मत खस्दा राप्रपालाई हातमा लाग्यो सुन्य !
ARCHIVE, COVER STORY, POLITICS, SPECIAL » एमालेकै छ क्रेज ! उपमेयरमा हुँदै नभएको उम्मेदवारलाई ६ हजार मत खस्दा राप्रपालाई हातमा लाग्यो सुन्य !
काठमाडौँ - हुन त चुनावमा विभिन्न पार्टीबीच तालमेल हुनु अस्वाभाविकपनि होइन । तर काठमाडौँ र ललीतपुरमा एमाले र राप्रपा मिल्दा त्यसले खास प्रतिफल दिन सकेन । राप्रपाले मेयरमा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई समर्थन गरेपछि उपमेयरमा बाबुकाजी थापालाई उम्मेदवार बनाउंदा राप्रपालाई यो तालमेल हातमा लाग्यो सुन्य जस्तै भएको छ ।
मतगणना हेर्दा यस्तो देखियो कि एमालेका हुँदै नभएको उपमेयरको उम्मेदवारले बढी मत पाएका छन् । बिहीबार साँझ १० नम्बर वडासम्म मत आइसक्दा बाबुकाजी थापाले जम्मा ३ हजार ६३७ मत पाएका छन् भने उपमेयरमा एमालेको सूर्य चुनाव चिन्हमा ६ हजार १२६ मत पाएका छन् । एमालेका मेयरका उम्मेदवारको मत भने ९ हजार ४५२ छ ।